Free Thinker: စင်ကာပူတွင် ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်းအကြောင်း
ကိစ္စများမြောင် လူတို့ဘောင်တွင် အလွန်အရေးကြီးသောကိစ္စတစ်ခုကို ပြပါဟု ဆိုရလျှင် လက်ထပ် ထိမ်းမြားခြင်း မင်္ဂလာ ကို ပြရပါလိမ့်မည်။ တစိမ်းမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့် ယောက်ျားကလေးတစ်ဦး သွေးချင်း စပ်ပြီး တစ်သက်လုံးနေသွားရမည်ဖြစ်ရာ သည်ကိစ္စ သေသေချာချာလုပ်မှ ဖြစ်မည်။ နောက်ပြီးလက်ထပ်ပြီး နောက် မွေးလာမည့် သားသမီးများမှာ မိမိမျိုးဆက်ဖြစ်ပေရာ အလွန်အရေးကြီးသော ကိစ္စဖြစ်ပေသည်။
သို့အတွက် လပ်ထပ်ခြင်းကိစ္စကို ကျကျနန သိထားဘို့လိုပေလိမ့်မည်။ ကျွန်တော် စင်ကာပူနှင့် ပတ်သက်သမျှ လက်လှမ်း မီရာ ခေါင်းထဲပေါ်လာသမျှ လျှောက်ရေးနေသော်လည်း သည် အင်မတန် အရေးကြီး လှသော လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းအကြောင်း စိုးစဉ်းမျှ သတိမရ။ အလွန်ရှော်သော ခေါင်း ဖြစ်ပါ၏။
ယခု ကိုလန်ဘား က အနာဂတ်တစ်ခု ဖန်တီးတည်ဆောက်ခြင်းတွင် လက်ထပ်ခြင်းကိစ္စ မပါ။ သည့်အတွက် ရေးပေးပါရန် တောင်းဆိုလာပါမှ သတိရပါတော့သည်။ သည့်အတွက် ကိုလန်ဘားကို ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါသည်။ ပြောနေကြာရော့။ စကြပါစို့။
စင်ကာပူတွင် အလျဉ်စလို လက်ထပ်ချင်လို့မရ။ သတို့သား၊ သတို့သမီးလောင်းများမှာ တန်းစီ နေသည် ဖြစ်ရာ လက်ထပ် လိုသူများသည် အနည်းဆုံး ၃ လ လောက်ကြိုတင် booking လုပ်ထားရန် လိုကြောင်း ပထမ ဦးစွာ သတင်းပေးလိုပါသည်။ သို့သော် ခြွင်းချက်အနေနှင့် စင်ကာပူမှာလည်း လိုင်စင်ယူကာ အကျိုးဆောင် ပေးနေသော မြားနတ်မောင်အဖွဲ့များ ရှိပါသည်။ အာ၊ ၃ လ ကြီး များတောင်၊ ဘယ်စောင့်နိုင်မလဲ၊ မောင်နဲ့မယ် နီးချင်လှပြီ ဆိုသူများ သူတို့ဆီသွားပါ။ တစ်လလောက်နှင့် ရပါ၏။ ထုံးစံအတိုင်း နည်းနည်းတော့ ပိုကုန်မပေါ့လေ။ Express Charges ပေါ့။
စင်ကာပူတွင် လက်ထပ်ရန်အတွက် ရုံးတော်မှာ Registry Of Marriages ဖြစ်ပါ၏။ အတိုကောက် ROM ဟု ခေါ်ကြ ပါသည်။ မည်သူမဆို လက်ထပ်လိုလျှင် ROM သို့သွားရမည်။ မြန်မာများအဖို့ သိပ်ရှေရှေ ဝေးဝေး ရှာနေစရာမလိုပါ။ ROM ရုံးမှာ ပင်နင်စူလာအနီးတွင်ပင် ရှိပါသည်။ လမ်းလျှောက်သွားလျှင် ဆယ်မိနစ်မျှပင် မလျှောက်ရပါ။ လိပ်စာမှာ No. 7, Canning Rise ဖြစ်ပါ၏။
ပင်နင်စူလာနှင့် ဖူနန်စင်တာအကြားလမ်းအတိုင်း တည့်တည့်လျှောက်သွားရုံသာဖြစ်ပါ၏။ လမ်းမှာ တောင်ကုန်းကလေး ပေါ် တက်သွားရပါလိမ့်မည်။ လမ်း၏ဘယ်ဘက်အခြမ်းတွင် ROM ရုံးကို တွေ့ပါလိမ့်မည်။ လက်ရှိ ROM ရုံးကို ၁၉၈၃ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့က လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး Mr Ahmad Mattar က ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။ တစ်နှစ်လျှင် ROM သို့ လာရောက် လက်ထပ်ကြသော စုံတွဲပေါင်း နှစ်သောင်း တစ်ထောင်မျှ ရှိသည် ဆိုပါ၏။
၁။ လက်ထပ်ရန် ပြင်ဆင်ခြင်း
လက်ထပ်ခွင့်ရရန် မည်သည့်အချက်အလက်များနှင့် ပြည့်စုံရမည်နည်း
၁။ အသက် ၂၁ နှစ်ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
၂။ စင်ကာပူနိုင်ငံသားများနှင့် PR များ Identity Card ယူခဲ့ရမည်။
၃။ နိုင်ငံခြားသားများ ပတ်စ်ပို့ယူခဲ့ရမည်။ (S Pass, EP စသည်)
၄။ အသက် ၂၁ နှစ် ပြည့်ပြီးသူ သက်သေနှစ်ဦး ၎င်းတို့၏ IC သို့မဟုတ် Passport များနှင့်အတူ လိုက်ပါရမည်။
၅။ အသက် ၁၈ နှင့် ၂၁ အကြား လူငယ်များအတွက် မွေးစာရင်းတင်ပြရမည်။ မိဘများလည်း ၎င်းတို့၏ IC သို့မဟုတ် Passport များနှင့်တကွ လိုက်ပါရမည်။
၆။ အကယ်၍ အသက် ၁၈ နှစ်အောက် လူငယ်များ လက်ထပ်လိုလျှင် မိဘများ Counseling Section ၌
Work Permit Holder များနှင့်ပတ်သက်၍ စင်ကာပူတွင် ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်းအကြောင်းကို အနာဂတ်တစ်ခု ဖန်တီး တည်ဆောက်ခြင်း စာမျက်နှာ ၁၀၇ တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
WP ကိုင်ဆောင်ထားသူ တစ်ဦးသည် စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ် နေစဉ် အတွင်း စင်ကာပူ နိုင်ငံအတွင်းတွင် သော်လည်းကောင်း၊ စင်ကာပူ ပြင်ပတွင် သော် လည်းကောင်း စင်ကာပူနိုင်ငံသား၊ စင်ကာပူ PR များနှင့် (လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး) မည်သည့် ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်မျှ လက်ထပ်ပိုင်ခွင့်မရှိ။ ဤဥပဒေသည် WP သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသွားသည့်တိုင်၊ သို့မဟုတ် cancel လုပ်ပြီးသည့်တိုင် အကြုံးဝင်ပါသည်။ (အထက်ပါရည်ညွှန်း Fourth Schedule အပိုဒ် ၉။)
အကယ်၍ လက်ထပ်လိုပါက Controller ထံသို့ ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံရမည် ဖြစ်ပါ သည်။ WP ကိုင်ဆောင်သူသည် အမျိုးသမီးဖြစ်ပါက သူမကိုင်ဆောင်ထားသော WP သက်တမ်းအတွင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခွင့်၊ သားဖွားခွင့်မရှိ။ သို့သော် Controller ၏ ခွင့်ပြုချက် ဖြင့် စင်ကာပူနိုင်ငံသား၊ သို့မဟုတ် စင်ကာပူ PR များနှင့် လက်ထပ်ထားပြီးဖြစ်သော WP ကိုင်ဆောင်ထားသူ အမျိုးသမီးများသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်၊ မီးဖွားနိုင်ပါသည်။ (အထက်ပါ ရည်ညွှန်း Fourth Schedule အပိုဒ် ၁၀။)
၁။ အိမ်ထောင်ကွဲနေသူဖြစ်ပါက ယခင်အိမ်ထောင်နှင့် တရားဝင်ကွာရှင်းပြတ်စဲပြီးဖြစ်ကြောင်း ရုံးတော်မှစာ ယူခဲ့ရမည်။ သို့မဟုတ် သေဆုံးခဲ့လျှင်လည်း သေဆုံးလက်မှတ် (Death Certificate) ယူခဲ့ရမည်။
၂။ သတို့သား သို့မဟုတ် သတို့သမီး တစ်ဦးဦးသည် လက်မှတ်ထိုးမည့်နေ့မတိုင်မီ စင်ကာပူနိုင်ငံအတွင်း အနည်းဆုံး ၁၅ ရက် နေထိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ရမည်။
၃။ အချက်အလက်များကို မဟုတ်မမှန်၊ လိမ်လည်ဖော်ပြခဲ့ပါက ငွေဒါဏ်၊ သို့မဟုတ် ထောင်သုံးနှစ်ထိ ပြစ်ဒါဏ်၊ သို့မဟုတ် ထောင်ဒါဏ်+ငွေဒါဏ် နှစ်ရပ်စလုံး ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။
လက်ထပ်လိုသူများအနေနှင့် လက်ထပ်ခွင့်ရရန် ကြိုတင် booking လုပ် (filing notice) လုပ်ရပါမည်။ ဤကဲ့သို့ filing notice လုပ်ခြင်းကို online မှသာ လက်ခံပါသည်။ Filing လုပ်လိုသူများ အောက်ပါ link သို့ သွားပါ။
Filing Notice လျှောက်လိုက်လျှင် သူတို့က Date of Notice ပေးပါလိမ့်မည်။ လက်ထပ်ရန်ရက်မှာ ထိုရက်မှစပြီး ၂၁ ရက် နောက်ပိုင်း နှင့် သုံးလ မတိုင်မီ ဖြစ်ပါသည်။ ရှင်းပြပါမည်။
သင်သည် Filing Notice ကို စက်တင်ဘာ ၁ ရက်နေ့က လျှောက်လိုက်သည် ဆိုပါစို့။ Booking လုပ်ထားသော အတွဲများ ကို ကြည့်ပြီး အားမည့်ရက်ကို ချိန်ကာ သူတို့က Date of Notice ကို အကြောင်းပြန်ပါလိမ့်မည်။ သူတို့က သင့်ကို နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့အား Date of Notice ဟု ပေးလိုက်သည် ဆိုကြပါစို့။ သင်လက်ထပ်ရမည့်ရက်မှာ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့အတွင်း ဖြစ်ပါသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့ထက်စော၍ မရသလို ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့ထက် နောက်ကျ၍လည်း မရပါ။
အရေးကြီးသည်မှာ ပေးစရာရှိသည့် အောက်ပါအခကြေးငွေများကို အပြည့်အ၀ပေးပြီး၍ ROM က ရပါပြီ ဆိုမှ သူတို့က Date of Notice ကို ဆက်လုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Popular Date များ ဆိုသည်မှာ -
 22 September 2010 (8TH LUNAR MTH - 15TH DAY)
 10 October 2010 (DOUBLE DATE)
 11 November 2010 (DOUBLE DATE)
 12 December 2010 (DOUBLE DATE)
 01 January 2011 (DOUBLE DATE)
 02 February 2011 (DOUBLE DATE)
 14 February 2011 (VALENTINE DAY)
 17 February 2011 (CHINESE VALENTINE DAY)
 03 March 2011 (DOUBLE DATE)
 04 April 2011 (DOUBLE DATE)
 05 May 2011 (DOUBLE DATE)
 06 June 2011 (DOUBLE DATE)
 07 July 2011 (DOUBLE DATE)
 08 August 2011 (DOUBLE DATE)
 09 September 2011 (DOUBLE DATE)
 12 September 2011 (8TH LUNAR MTH - 15TH DAY)
ပိုက်ဆံကို ငွေသားနှင့်ပေး၍ မရပါ။ အင်တာနက်မှ Credit Card သို့မဟုတ် Internet Banking ဖြင့် ပေးနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် ROM ရုံးသို့ လူကိုယ်တိုင်သွားကာ Cash Card သို့မဟုတ် Bank Card ဖြင့် ပေးနိုင်ပါ သည်။ (သွင်းပြီးသောငွေကို ပြန်အမ်းလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။)
သင်လျှောက်ထားသော Filing of Notice ကို အတည်ဖြစ်မဖြစ် နှင့် သင်၏ Notice No. ကို သိလိုလျှင် အင်တာနက်မှသာ ရှာလို့ရပါသည်။ ROM ရုံးသို့ ဖုံးဆက်၍ ဖြစ်စေ လူကိုယ်တိုင်သွား၍ဖြစ်စေ မေးလို့မရနိုင်ပါ။ အောက်ပါ link တွင် မိမိ၏ နာမည်နှင့် IC No. သို့မဟုတ် Passport No. ရိုက်ထည့်ပြီး ရှာနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်၏ filing လုပ်ခြင်း အထမြောက်သွားပါက Filing Instruction ကို print out လုပ်ထားရပါမည်။ ROM တွင် စာရွက်စာတမ်းများ မှန်မမှန် အစစ်ဆေးခံရန် သွားသောအခါ ထိုစာရွက်ကိုပါ ယူဆောင်သွားရပါမည်။ ထိုစာရွက် မပြနိုင်ပါက ROM မှ သင်၏ လျှောက်လွှာကို ငြင်းပယ်ခြင်း ခံရပါလိမ့်မည်။ ထို့အတူ သင်သွင်းထားသော ငွေများပါ ဆုံးပါလိမ့်မည်။
အရေးကြီးသည့် တစ်ချက်ကျန်ပါသေးသည်။ Notice of Marriage လျှောက်ပြီး အတည်ဖြစ်သည်နှင့် ထို approval ကို cancel လုပ်၍ မရတော့ပါ။ သတ်မှတ်ထားသည့်ရက်အတွင်း လက်မထပ်ဖြစ်ပါက လက်ရှိ Notice သည် ပျက်ပြယ်သွားပါလိမ့်မည်။ လက်ထပ်လိုပါက အသစ်ထပ်လျှောက်ရပါမည်။
ရနိုင်သောရက်များကို http://app.rom.gov.sg/internet/reg_info/rom_married_outside_option3.asp မှ FAQ - What are the available dates? တွင် စစ်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ လက်မှတ်ထိုးမည့်နေ့တွင် လူအများကြီး ခေါ်မသွားပါနှင့်။ ရုံးမှာ သိပ်မကြီးလှပါ။ ဆယ်ယောက်၊ ဆယ့်နှစ်ယောက်လောက်ဆို တော်ပါပြီ။ နောက် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဆွမ်းကျွေးသည့်အခါမှ တစ်ဝကြီး ဖိတ်ပါ။
၂။ ROM တွင် လက်မှတ်ထိုးခြင်း
လက်မှတ်ထိုးရန် သတ်မှတ်ထားသော ရက်နှင့် အချိန် အတိအကျလာပါ။ ချိန်းဆိုထားသော အချိန်ထက် အနည်းဆုံး ၁၅ မိနစ်စော၍ လာရပါမည်။ လက်မှတ်ထိုးမည့် သက်သေနှစ်ယောက်ပါ လာရပါမည်။ သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ထက် နာရီဝက် နောက်ကျပြီးမှ ရောက်လာပါက အချိန်လွန်ကြေးပေးရပါလိမ့်မည်။
လက်ထပ်စုံတွဲကို ပန်းများ၊ ဆန်များ၊ ဘာညာကွိကွများကြဲပက်ခြင်း မပြုရပါ။ မိမိရှုပ်ထားသော အမှိုက်ကို မိမိဘာသာ ပြန်ရှင်းပေးရပါလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည် ROM ပြင်ပတွင် လက်မှတ်ထိုး သို့မဟုတ် မင်္ဂလာ အခမ်းအနားပြုလုပ်လိုသည်ဆိုပါစို့။ မိမိတို့ ရပ်ကွက်အတွင်းမှ လိုင်စင်ရ ဘိသိက်ဆရာကြီးများ (လက်ထပ်ပေးမည့် တရားသူကြီး) ကို ခေါ်နိုင်ပါသည်။ Licensed Solemnisers တွင် မိမိနေထိုင်သည့် အိမ်လိပ်စာ၏ postal code ကို ရိုက်ထည့်လိုက်သည်နှင့် အနီးဆုံး ဆရာကြီးများ၏ contact no. များကို ပေးပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ထို ဘိသိက်ဆရာကြီးများအား ဘိသိက်ပေးခြင်းအတွက် တံစိုးလက်ဆောင် တစ်စုံတစ်ရာ မပေးရပါ။ သို့သော် ဆရာကြီးများ မင်္ဂလာအခမ်းအနားသို့လာခ ကုန်ကျစရိတ်ကိုမူ (S$28 မှ S$48 ထိ) ကျခံရပါမည်။
ဘိသိက်ဆရာကြီးများသည် သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ထက် မိနစ် ၃၀ ကျော်မှရောက်လာပါက မင်္ဂလာအခမ်းအနားကို ဆက်လုပ်၍ မရတော့ပါ။ လုပ်လိုလျှင် ပြန်လည် e-Filing လုပ်ရပါလိမ့်မည်။ ငွေလည်း ထပ်သွင်းရပါမည်။
၁။ သတို့သားနှင့် သတို့သမီး နှစ်ဦးလုံး၏ IC သို့မဟုတ် ပတ်စ်ပို့ ယူဆောင်လာရပါမည်။
၂။ လက်မှတ်ထိုးမည့် အသက် ၂၁ နှစ်အထက် သက်သေနှစ်ဦးလုံးကို ၎င်းတို့၏ IC / Passport များနှင့်အတူ ခေါ်ဆောင်ခဲ့ရပါမည်။
၃။ Appointment Letter လည်း ယူခဲ့ရပါမည်။
၄။ လက်ထပ်လက်စွပ် (ယူချင်လျှင်)
၅။ မိဘ၊ မောင်ဘွား၊ အပေါင်းအသင်း၊ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ
ခြေညှပ်ဖိနပ်၊ ဘောင်းဘီတို၊ တီရှပ်၊ ဂျင်းပင်၊ ဂျင်းအင်္ကျီ စသည်တို့ လက်မခံပါ။
မင်္ဂလာဆောင်မည့်သူများ ရောက်သည်နှင့် မင်္ဂလာအခမ်းအနားအတွက် တာဝန်ယူပေးမည့် မိန်းကလေးတစ်ဦးက ဘာလုပ်ရမည်ကို ညွှန်ပြပေးပါလိမ့်မည်။ အခန်းမှာ အလွန်ရိုးစင်းလှသော အခန်းလေး တစ်ခုမျှသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဘိသိက်ပေးခြင်းမှာ လည်း ၅ မိနစ်ခန့်သာကြာပါသည်။ တရားသူကြီးဖတ်ကြားမည့် ဘိသိက်စာကို မိမိဘာသာ မိမိရေးချင်သလို ရေး၍မရ။ သူတို့တွင် standard vows ရှိပါသည်။
ဦးစွာ တရားသူကြီးက ယခုလက်ထပ်ခြင်းမှာ မိမိဆန္ဒအလျှောက် လက်ထပ်ခြင်းဟုတ်မဟုတ် မေးပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပြီး သတို့သားနှင့်သတို့သမီး လက်မှတ်ထိုးရပါသည်။ ထို့နောက်မှ သက်သေနှစ်ဦး လက်မှတ်ထိုးပါသည်။ ထို့နောက်တွင် တရားသူကြီးက လက်ထပ်စာချုပ်ကို ပေးပါလိမ့်မည်။
လက်ထပ်ပွဲ အခမ်းအနားမှာ သည်မျှသာ ဖြစ်ပါ၏။
၃။ လိုင်စင်ရ မြားနတ်မောင်အဖွဲ့များ
တခြားသွားစရာမလိုပါ။ ROM ရုံးကိုပတ်ပြီး နောက်ဖက် လျှောက်သွားလိုက်ပါ။ Love That Binds ကဲ့သို့သော လိုင်စင်ရ မြားနတ်မောင်များ Basement ထဲတွင် ရှိပါသည်။ ထိုအထဲမှ တစ်ဖွဲ့ကိုရွေးပြီး ကိုယ်လိုချင်တာ ပြောပြလိုက်ပါ။ သူတို့ အကုန်လုပ်ပေး ပါလိမ့်မည်။ အလွန်လွယ်ပါ၏။
သည်မျှဆိုလျှင် စင်ကာပူတွင် လက်ထပ်လိုသူများအတွက် အတော်အတန် ပြည့်စုံပြီ ထင်ပါသည်။ သိပ်ရှည်သွားလျှင် ပျင်းစရာကောင်းမှာစိုး၍ မလိုသည်များ ချန်ခဲ့ပါသည်။ အသေးစိတ်သိလိုသူများ www.rom.gov.sg တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
Posted by အေးငြိမ်း at 1:10 AM